Top Parenting Website in Myanmar - About Us - Chit MayMay
About Chit MayMay
Chit MayMay is one part of the Lifestyle Myanmar Group. Currently, we have changed our career to Social Media Publication, Digital Marketing and Advertising. We mainly provide information about lifestyle andavariety of topics including features, Relationship, Fashion, Health & Beauty, Celebrities, investigative stories, etc… with video animation, graphics series, and articles.
Chit MayMay Media team started with2members and now we are running with4experienced members.
Mr. Kyaw Htike Aung: He started his career at Lifestyle Myanmar media team since 2016 before its even launched. He is responsible for Content writing, Video editing, and System service.
Nyein Thu - March 21, 2022 0
ကလေးတစ်ဦးကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ အနစ်နာခံမှု၊ သင့်ရဲ့ အဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုနှင့် သင့်စွမ်းအင်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ပြုစုပျိုးထောင်နေတဲ့ကလေးက ထူးခြားသော လက်ဆောင်တွေနှင့် ထူးချွန်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေပါဝင်လာတဲ့အခါမှာ ပိုရှုပ်ထွေးလာပါလိမ့်မယ်။...
Nyein Thu - September 19, 2020 0
မွေးကင်းစကလေးငယ်ရဲ့ အနံ့ထက် အံ့ဩစရာကောင်းလောက်တဲ့ အရာတစ်ခုခုကိုဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ရဲ့ နှလုံးသားတွေကို အရည်ပျော်စေတဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ အမွှေးအကြိုင်တွေလိုမျိုးအရာတွေက စိတ်ခံစားမှုတွေကို အင်မတန်ထိမိစေပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေရဲ့...
Kyaw Htike Aung - August 30, 2020 0
ကျနော်တို့ရဲ့ ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အလုပ်ခွင် (သို့) ကျောင်းသင်ခန်းစာများကို လေ့လာဆည်းပူးခြင်း၊ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ရမယ့် တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုပြုလုပ်ခြင်း စသည်ဖြင့်...
Kyaw Htike Aung - August 24, 2020 0
ကလေးတွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ကြီးပြင်းလာဖို့၊ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့၊ အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ဖို့ဆိုတာတွေက မိဘတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဝါသနာကို သိရှိလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်နိုင်ခွင့် ရစေချင်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်နိုင်ဖို့ဆို...
Nyein Thu - August 16, 2020 0